उपकुलपति कोईरालाले नेतागिरी देखाउनुभयो, अंकुश लगाउनै पर्छ
Monday,9Jul, 2018 12:12 PM
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोईराला अहिले चर्चामा छन् । क्यानडामा हुने विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सरकारको अनुमति बिना नै भाग लिन जाने क्रममा शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बालुवाटार झिकाइयो भन्दै उनी प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना गर्दै हिँडिरहेका छन् । उपकुलपतिको पदीय हैसियतमा रहेर उनले गर्दै आइरहेको मिडियाबाजीका बारेमा चक्रपथ डटकमकर्मी कविता अधिकारीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालसँग गरेको संवाद :
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.कुलप्रसाद कोइरालाको खास घटना के हो ?
क्यानडामा हुने भनिएको सम्मेलनमा नजानुस भनेर कसेैले भनेको होइन । जिम्मेवार पदमा बसेको मानिस उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा सचिवले आफ्नो विश्वविद्यालयका कुलपतिसँग विदा लिएर जाने चलन छ । अनि रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई विदा चाहिँएमा उपकुलपतिले विदा स्विकृत गर्नेे व्यवस्था छ । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विदा स्विकृत गराउने कुरा गर्नुभएको छैन् । त्यसैले उहाँले ऐन नियम, विधि व्यवस्थाको पालना गर्नुभएन । विश्वविद्यालयको ऐन र नियममा नरहने उहाँको परीपाटी रहेछ । उहाँले कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आफ्नो भ्रमणका बारेमा कुरा राख्नु पथ्र्यो वा प्रधानमन्त्रीे कार्यालयमा निवेदन दिनुपथ्र्यो । तर उहाँले किन अटेर गर्नुभयो ?
खासमा भएको के हो भने– शिक्षामन्त्रालयबाट विदेशमा हुने कार्यक्रमको बारेमा असार १० गते विहान मलाई फोन आएको थियो । मसँग नै शिक्षामन्त्रालयका पदाधिकारीले उपकुलपतिको सम्पर्क नम्बर लिनुभएको हो । मैले दिए, अनि फेरि उताबाट फोन आयो उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भनेर र मलाई नै उपकुलपतिलाई मन्त्रालयबाट फोन आएको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुस् भन्ने खबर दिनु भन्ने कुरा भयो । मैले उहाँलाई सबै बेलिविस्तार सुनाएँ । उहाँलाई भेटेरै मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विदेश जाने कुरा एकपटक राख्नुस भने । त्यस समय उहाँले अटेर गर्नुभयो । र, भन्नुभयो ‘म त्यहाँ निवेदन दिन जान्न बरु शिक्षामन्त्रालयमा जानकारी राख्या छु जे हुन्छ हुन्छ । अरुकोमा म जान सक्तिन’ । मैले त प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह लिएर जाँदा राम्रो होला भन्ने सुझाब दिएको थिए । हामीले नियम र कानुन मान्न पर्यो, प्रधानमन्त्रीसँग द्धन्द गरेर त विश्वविद्यालय चल्दैन नि भन्यौ । तर, उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन । त्यस समय उहाँलाई धेरैठाउँबाट सुझाब दिएकै हो तर उहाँले कसैको कुरा मान्नु भएन । अहिले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ शतप्रतिशत गलत गरिरहनुभएको छ । पदमा बसेको व्यक्तिले जसको पालामा नियुक्ति भएपनि कुलपतिको निर्देशन मान्नुपर्छ । ऐन नियम मान्नै पर्छ, मिच्ने काम कसैले पनि गर्न मिल्दैन् ।
उहाँले आफनो समुहमा केही अशोभनीय काम गर्नुभएको छ । कुलपतिले यसो गरे उसो गरे भन्दै मिडियावाजी गरिरहनुभएको छ । यो सब भ्रम हो । नियम नमान्नेलाई नियममा राख्नुपर्छ । त्यसमा उपकुलपतिको गल्ती छ । उल्टै मनलाग्दी बोल्न पाईदैन् । अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाईएको छ । अप्रमाणित कुरामा आरोप लगाउने ?
कुलपति त यसैपनि हामीहरुलाई सहयोग गर्ने खालकै हुनुहुन्छ । उहाँले सहयोग गर्दागदै पनि सामान्य जानकारी समेत गर्न नचाहनु उपकुलपतिकै कमजोरी हो । त्यसलाई कुनैपनि बहाना वा शक्तिले ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले अपराधीलाई जस्तो छापामार शैलीमा फिर्ता बोलाउनुभयो भन्दै हिड्नुभएको छ नि उहाँ ?
उच्छ्रृंखल मर्यादा विपरित गर्ने जो सुकै व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम अत्यन्त सराहनीय छ । ऐन नियम नमान्नेलाई ऐन नियमभित्र ल्याउनु कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले आफनो कर्तव्य पुर्ण रुपमा पालना गर्नुभएको छ । यसलाई कुनै आरोप लगाउँन मिल्दैन । उहाँले आफनो समुहमा केही अशोभनीय काम गर्नुभएको छ । कुलपतिले यसो गरे उसो गरे भन्दै मिडियावाजी गरिरहनुभएको छ । यो सब भ्रम हो । नियम नमान्नेलाई नियममा राख्नुपर्छ । त्यसमा उपकुलपतिको गल्ती छ । उल्टै मनलाग्दी बोल्न पाईदैन् । अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाईएको छ । अप्रमाणित कुरामा आरोप लगाउने ? प्रधानमन्त्रीले त विश्वविद्यालयमा कतिसम्म सहयोग गर्नुभएको छ भने काँग्रेस निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जति नियुक्ति गर्नुभएको छ, ती सबै काँग्रेस निकट प्राचार्यहरु हुन् । त्यस्तो सपोर्ट गर्दा गदै पनि अनर्गल प्रचार गर्ने ? उपकुलपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाएको हुँदा विधि व्यवस्थाको पालना गर्ने सन्दर्भमा कुलपतिलाई फाइदा नै पुगेको छ । नियम सबैमा लागु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले शुरुवात गर्नुभएको छ । यो एकदमै खुसीको कुरा हो ।
उहाँ नियुक्ति भएर आएदेखि अहिले पनि विभिन्न १४ वटा क्याम्पसमा ऐन, नियम विपरित ३/३ महिनामा आफुलाई आवश्यक हुने मानिसहरु नियुक्ति गर्दै हिड्नु भएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय मनोमानी ढंगले चलेको छ ।
क्यानडामा हुने सम्मेलनका बारेमा तपाईहरुलाई कतिको थाहा थियो ? त्यो कार्यक्रममा उहाँ नै जानुपर्ने थियो र ?
हामीलाई जानकारी थियो । क्यानडामा सम्मेलन हुदैछ भनेर । त्यो कार्यक्रममा भिसि, रेक्टर, रजिष्ट्रार तीन वटै निकायका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुपर्छ भन्ने थियो तर पछि आर्थिक अभाव छ भन्ने थाहा भएपछि सबै किन जाने भनेर हामीहरु रोकिएका हौ । त्यो कुरा फागुनको थियो तर अन्तिममा चाहिँ को को जादै हुनुहुन्छ भन्ने हामीसँग छलफल भएको थिएन । उपकुलपतिले एकैचोटी यो दुर्घटना गराउनुभयो । अर्को कुरा, सम्मेलनमा उहाँ देखिबाहेक अरु जानै नमिल्ने भन्ने पनि होईन । जो गए पनि हुन्छ, तर वरिष्ठ अनुभवि व्यक्ति जानुपर्यो । हाम्रोमा अनुभवी गरिमायुक्त अरुहरु पनि हुनुहुन्छ तर उहाँले अरुलाई पठाउन मान्नुभएन । निश्चित नाम ल्याउनुभयो । र, उहाँहरु नै जान पाउनुभयो । क्यानडाको यो प्रशंग त्यति राम्रो भएन । यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ ।
अहिले उहाँले जे गरि रहनुभएको छ, एउटा वौद्धिक व्यक्तित्वले यस्तो गर्न मिल्छ ?
अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइएको छ । अहिले जसरी जे मनलाग्यो त्यही बोल्दै हिडनुभएको छ नि यो उहाँलाई पटक्कै सुहाँउदैन । उहाँको पदले पनि दिदैन । उहाँ अहिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित बोल्दै हिडनुभएको छ । विश्वविद्यालयको कुलपति विरुद्ध नचाहिने भ्रम छर्ने काम गर्नुभएको छ । उहाँ अहिले राजनीति गर्न थाल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि उहाँ आत्तिन थाल्नुभएको थियो । जसको परिणाम पनि हो यो घटना । नियमको परिधिभित्र नरहने अनि अत्तालिएर जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँ उपकुलपति भएदेखि आजसम्म उहाँको व्यबहार हेर्दा प्राचार्य जस्तो व्यक्ति नै लाग्दैन, उहाँमा केही पनि अनुभव छैन् । नेतागिरी जस्तो गरेर हिँडदा विश्वविद्यालय चलाउन गाह्रो पर्छ । आफना सम्पुर्ण निकायलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा कुनै अनुभव पनि छैन् । त्यही भएर उपकुलपतिका क्रियाकलापले हामी सबै दिक्क भएका छौ । निर्णय गर्ने क्षमता छैन् । एकथोक बोल्यो अर्कोथोक गर्यो । हामीले त अरु के भन्ने हो र त्यति हो कुलपतिले उपकुलपतिलाई अंकुश लगाउनै पर्छ, अन्यथा अराजकता झनै फैलिन्छ । अहिले उहाँले मिडियामा नचाहिने कुरा बोलिरहनुभएको छ । त्यो मर्यादित पदमा बसेर बोल्ने कुरा होइन । एउटा संस्थाको गरिमालाई आँच आउने कार्य उहाँबाट भईरहेको छ । उहाँले विश्वविद्यालयको जिम्मेवार पदमा बसेर अमर्यादित र प्रतिपक्षको सभासदले बोल्ने जस्तो नराम्रो सन्देश दिदै हिँडनुभएको छ ।
‘म त्यहाँ निवेदन दिन जान्न बरु शिक्षामन्त्रालयमा जानकारी राख्या छु जे हुन्छ हुन्छ । अरुकोमा म जान सक्तिन’ । मैले त प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह लिएर जाँदा राम्रो होला भन्ने सुझाब दिएको थिए । हामीले नियम र कानुन मान्न पर्यो, प्रधानमन्त्रीसँग द्धन्द गरेर त विश्वविद्यालय चल्दैन नि भन्यौ । तर, उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन । त्यस समय उहाँलाई धेरैठाउँबाट सुझाब दिएकै हो तर उहाँले कसैको कुरा मान्नु भएन । अहिले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ शतप्रतिशत गलत गरिरहनुभएको छ ।
उहाँ नियुक्ति भएर आएदेखि अहिले पनि विभिन्न १४ वटा क्याम्पसमा ऐन, नियम विपरित ३/३ महिनामा आफुलाई आवश्यक हुने मानिसहरु नियुक्ति गर्दै हिड्नु भएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालय मनोमानी ढंगले चलेको छ । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पुनरावेदन आयोगमा पनि गैर कानुनी ढंगले नियुक्ति गर्नुभयो । जस्तै, ऐन र नियममा ‘विश्वविद्यालय भन्नाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सम्झनुपर्ने छ’ भन्ने छ । यति हुँदाहँुदै पनि उहाँले ऐन र नियमलाई कुल्चेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई ऐनको १९ ‘ख’ अनुसार नियुक्ति गर्नुभएको छ । त्यो सरासर गैर कानुनी छ । उहाँले विश्वविद्यालय भित्र पनि विभिन्न अनर्गल भ्रम छरेर करोडौं रुपैयाँ आर्थिक भार पारिरहनु भएको छ ।